Imibuzo evame ukubuzwa - i-Guangzhou Meiyi Electronic Technology Co. Ltd.
Ubuncane be-oda Ubuningi
Kumakhasimende amasha, angafaka i-oda lesilingo lokuhlola umkhiqizo’ikhwalithi nokuthengiswa ezimakethe zabo.
Lesi yisikhathi sami sokuqala ukusebenzisa umshini wegeyimu, kuyinkimbinkimbi ukufaka?
CHA, Kulula kakhulu ukuyifaka, uma unezimpahla, ingasebenza ngqo ngemuva kokuvula amandla.
Uma i-voltage ne-plug yomkhiqizo wakho kuzofika nezinga lami?
Sizoqinisekisa ulwazi lwe-voltage ne-plug nekhasimende kusengaphambili bese sikhiqiza imishini njengekhasimende’Isicelo.
Uma inkampani yakho ingakwazi ukwenza umkhiqizo futhi ifake i-logo yethu?
Sineqembu lethu lomklami, singaklama futhi senze ngokwezifiso yonke imikhiqizo kufaka phakathi umbala, ukuphrinta, iphethini kanye nelogo.
Ngabe unikela ngemuva kwensizakalo, ngisho nasezweni lethu?
Yebo! lokhu ukwesekwa okubalulekile. Siqinisekisa unyaka owodwa iwaranti + impilo yonke ukwesekwa kwezobuchwepheshe. (I-PCB unyaka owodwa iwaranti yamahhala, izingxenye zokugqoka ezisheshayo izinyanga ezintathu); ochwepheshe bethu bazokuqondisa online ngesineke, benze isixazululo sobungcweti ngezithombe namavidiyo wamakhasimende, akhombisa ukuthi ukufaka noma ukulungisa kusebenza kanjani igxathu negxathu. izingxenye zokuphumula ezizosuswa sizoyifaka esikhundleni samakhasimende ngohlobo lwenkokhiso noma ngaphandle kwenkokhiso.
Sifuna imidlalo ehlukene. Ungangenzela lokho?
Sinesipiliyoni seminyaka eyi-12 embonini yomdlalo. Siyajabula kakhulu ukusiza abathengi bethu ukuthi bathenge noma imiphi imishini abayithandayo. Kulula kakhulu kithina. Isevisi imahhala
Isikhathi sokuphila somkhiqizo wakho?
Yonke imishini yakhiwe ngezinto ezintsha zekhwalithi ephezulu sha. Ngakho-ke imishini yonke isesikhathini eside sokuphila eminyakeni, nenkinga yamaphutha encane. Amakhasimende angathola ukubuyiselwa maduze futhi enze inzuzo iminyaka eminingi.
Ungangenisa kanjani kusuka eChina?
Ilula kakhulu, imvamisa kunezindlela ezintathu ongakhetha kuzo:
1. sisebenzisana nentengo ye-EXW, Unesibopho sokuhambisa imikhiqizo esuka e-China iye ezweni lakho. Kuzofanele uthole umthengisi wangokwezifiso ukukusiza usule amasiko ukuze uthole izimpahla kumasiko wakho wangakini.
2. Sisebenzisana nentengo ye-CIF, izimpahla sizothumela esikhumulweni semikhumbi esiseduzane nedolobha lakho, uthola umenzeli wokuthumela ukukusiza ukusula amasiko ukuthola izimpahla kumasiko wendawo.
Imvamisa, Uma ufuna ukungenisa kusuka eChina isikhathi eside, ngiphakamisa ukuthi usebenzise indlela yokuqala. Uma ungamazi umenzeli wakho wendawo noma inkampani evumela amasiko, ngingancoma abanye abenzeli abathembekile kuwe.
Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuletha izimpahla ezivela e-china ziye ezweni lami?
Ngokuqondene nesikhathi itheku elihlukile lehlukile. Ngokuvamile’s inyanga eyodwa ngasolwandle, izinsuku zokusebenza ezi-3-7 ngendiza.
Uma inkampani yakho ingangisiza ngigodle ihhotela uma sizovakashela imboni yakho?
Inkampani yethu ingasiza amakhasimende ukuthi agcine ihhotela uma eza eChina futhi singalanda amakhasimende esikhumulweni sezindiza noma ehhotela uma kunesidingo.